Masoandro amin'ny masoandro, jiron'ny jiro ho an'ny miaramila, sambo, marin-drano sy lakandranon'i Guard, sambo | Solar Solve Marine
Asio endri-tsoratra masoandro ankalazain'ny Masoandro ho an'ny sambon'ny miaramila, tobim-piaramanidina miaramila sy mpiambina
SOLASOLV® Solon'ny mason-tsivana marevaka dia mampihena ny hafanana sy ny hafanana vokatry ny masoandro mba hamoronana tontolo iainana azo antoka sy mora kokoa.
Tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa hametrahana azy SolaSOLV® mijery ny fiaramanidina mpiady amin'ny fiaramanidina mba hiantohana ny fiarovana amin'ny safidy, hampitombo ny fampiononana ny ekipa sy ny fivoahana CO2 mampidi-doza.
Manjaka ny olana ara-toekarena sy ara-tontolo iainana mba hampihenana ny fampiasana herinaratra, hanafoanana ny fandaniana ary hampitombo ny fahombiazan'ny angovo ao anatin'ny tontolo miaramila. SolaSOLV® Ireo anti-glare roller screens dia afaka manampy izany amin'ny alàlan'ny fanilihana hatramin'ny 87% ny hafanana amin'ny masoandro eo amin'ny tetezana amin'ny fiaramanidina. Izany dia mampihena ny fangatahana amin'ny rafitra fanamafisana ny rivotra izay mampidina ny CO2 mampidi-doza ary mamonjy solika sy vola ihany koa.
Ankoatry ny tombotsoan'ny tontolo iainana sy ny vola lany, ny tombony azo antoka amin'ny SOLASOLV® dia tena zava-dehibe. Ilaina ny fandidiana azo antoka ny sambo miaramila sy mpiambina ny morontsiraka. Ny efijery SOLASOLV® dia mampihena hatramin'ny 93% ny famirapiratana sy ny taratra avy amin'ny masoandro ka mahatonga azy ireo ho fanampiana azo antoka amin'ny fivezivezena rehefa ampiasaina amin'ny varavarankely fitetezana tetezana. Ny faritra hafa amin'ny sambo dia afaka mahazo tombony ihany koa toy ny efitrano fanaraha-maso, efitrano fandinihana, efitrano fandidiana sy varavarankely izay tsy maintsy hitan'ny mpitety sy ny mpandraharaha mazava tsara ny fomba fijery ivelany. Ny efijery SOLASOLV® dia mandaitra ihany koa amin'ny fandavana ny tara-pahazavana amin'ny ranomandry sy ny lanezy ary ny masoandro ririnina ambany. Amin'ny toe-javatra any amin'ny Tendrontany Avaratra dia manampy amin'ny fandavana ny rivotra mangatsiaka be any ivelany ny takelaka.
SOLASOLV® Anti-Glare Solaran-tsary mareva-doko manana fiara 7 taona.
Lazao ny marika SOLASOLV® amin'ny anarany - tsy misy safidy hafa, hiantohana ny fiaramanidinao an-dranomasina manana fiarovana mandaitra sy azo antoka indrindra azo ampiasaina amin'ny fananganana trano vaovao, fametahana indray, fanavaozana ary fanovana… .antohana hanatanterahana sy hikolokoloana maimaimpoana.
Ny Sunscreens dia ampiasaina amin'ny USNS Rappahannock. Ny famporisihana ireo mpiasan'ny Navy ho mpitantana angovo tsaratsara kokoa dia tsy vitan'ny hoe hanampy ny baiko eo an-toerana hihaona amin'ny tanjon'ny angovo ihany, fa hitahiry vola ihany koa amin'ny alàlan'ny fampihenana ny vidin'ny fampiasana izay mampitombo ny fahafahan'ny loharanon-karena tsy ampy ho an'ny iraka miaramila.
Ny solila SOLASOLV® dia efa nampiasaina nandritra ny taona maro mba hanome vahaolana amin'ny olana ara-pahasalamana mifandraika amin'ny hafanana sy ny hafanana avy amin'ny masoandro. Ny tombontsoa azo avy amin'ny SOLASOLV® dia mifototra amin'ny fitantanana ny hafanana hafanana amin'ny masoandro ary manjelanjelatra mba hampihenana ny tranganà lozam-pifamoivoizana amin'ny fihazonana ny fenitra ambony momba ny fahasalamana, ny fiarovana ary ny fahatsiarovan'ny tontolo iainana.
Ny SOLASOLV® Anti-glare Transparent Roller Blinds sy Sunscreens dia ampiasaina eran'izao tontolo izao…
Napetraka eo amin'ny sambo maro an'habakabaka eran-tany ny sunscreens SOLASOLV®. Mpamatsy ny tafika an-dranomasina britanika, navy holandey, tafika alemana, tafika amerikana, tafika frantsay, tafika marokana, navy brasil, tafika aostralianina, tafika japoney, tafika an-dranomasina Oman, tafika irlandey, tafika an-dranomasina Singapora, tafika an-dranomasina Koreana Tatsimo, tafika an-dranomasina Royal Malaysian, Espaniôla tafika an-dranomasina, tafika an-dranomasina indianina, Guardia Coast Trinidad & Tobago, USCG ary saka haingana an'ny tafika.
Misy sambo anglisy maromaro mandray tombontsoa avy amin'ny masoandro avy amin'ny soler Solve:
Mankanesa 45 na Mpanafika avy amin'ny Air Air Defense HMS Daring sy HMS Dauntless
Ny sasany Etazonia Naval Vessels mampiasa Solar Solve SolasAFE® masoandro:
USNS John Glen USNS Newport Rappahannock USNS
USNS Big Horn Alan Shepard USNS USNS Laramie
US Patuxent USNS Leroy Grumman USNS Guadalupe
USNS Charles Drew Tippecanoe USNS Mpisava lalana USS
USNS Burlington Toerana amerikana WashingtonNS USS Fampiononana
Ary maro kokoa:
KV Nornen (Mpiambina morontsiraka norveziana)
CCGS Corporal McLaren MMV (Mpiambina amoron-dranomasina Kanadiana)
KD Lekir (F26) Corvette kilasy Kasturi (Navy Royal Malaysian)
HMAS Choules (Navy aostralianina)
NDCC Almirante Saboia (Navy Breziliana)
Mpiambina sisintany fanjakana Latvian
Royal Malayan Nav
Fiderana ny mpividy:
"Sambatra kokoa aho. Ianareo lehilahy dia nanao asa tena tsara. Hanohy ny teny "aho.
Sgt.1st Class Scott Koleski, tafika amerikana
"Miavaka! Ankasitrahako ny fanampianao ".
Capt. D Gommo, Tompoko, USNS Joshua Humphreys
"Misaotra betsaka noho ny hetsika haingana nataonao tamin'ity sy tamin'ny famoahana tsipika momba ny zavaboary".
"Misaotra. Tena mankasitraka izany isika "(ho setrin'ny fametrahana ny solosaina fanoloana solosaina nalefan'izy ireo nandritra ny famerenana azy).
BM1 Dean, mpiambina ny morontsin'i Etazonia
Karazana nankatoavina - ny marika tokana nankatoavin'i Lloyds, DNV ABS ary RINA.
Tazonina ny tena loko - Ny jiro miloko sy ny marika misy ny marika dia mora fantarina ary tsy voavaha velively.
Tontolo iainana miasa - Mamorona tontolo fiasana milamina kokoa ary mampihena ny fepetra takian-drivotra. Hatramin'ny 87% amin'ny hafanan'ny masoandro dia nolavina mba hanalefahana ny havizan'ny mpiasa.
Atao ho Manokana - isaky ny mpanjifa refy sy masontsivana. Mety amin'ny tranobe vaovao na amin'ny endriny Retro ary amin'ny endriny, zoro ary haben'ny varavarankely.
Quality Assured company - Solar Solve dia mpanamboatra ankatoavin'ny ISO 9001: Standard standard an'ny 2015 izay nomena antsika tamin'ny 2015.
Ny vokatra azo antoka sy ny fanompoana - fantatray fa ny vokatra sy ny serivisy kalitao ihany no ho tratrarin'ny fitaovana kalitao sy ny olona tsara kalitao hiantohana ny fahatokisan-tena ambony sy ny fampandehanana azy. Ny fitohizantsika maharitra amin'ny olona sy ny fotodrafitrasa dia manome ny mpanjifanay fahatokisana ny kalitaon'ny vokatra Solofo Solove. Ny mpiasantsika dia mirehareha amin'ny asany ary ny lazany amin'ny kalitao. Ny vokatra rehetra dia amboarina any Angletera izay singa manana kalitao avo lenta ihany.
Fanatsarana tsy tapaka - Manana tetik'asa fanatsarana mitohy ny Solar Solve. Mianatra ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fanamboarana vokatra avo lenta sy azo atokisana ao amin'ny Ivotoeram-panofanana ao an-trano ny mpiasa.
Ekipa teknikan'ny teknikam - ho an'ny fanontaniana sy ny fanontaniana momba ny fametrahana, ny fandidiana na ny fangatahana jamba na ny efijery dia vonona hatrany hanampy ireo injeniera za-draharaha sy ny mpiasa mahay.
Ny momba ny SOLASOLV Sunscreens ho an'ny sambo Naval, Miaramila ary ny mpiambina
Ny sarimihetsika manokana alokaloka ampiasaina amin'ny sunblindonika mangarahara anti-glare dia namboarina tamin'ny alàlan'ny sarimihetsika polyester. Io loko io dia nolokoina mba hampihenana ny glare ary ny hafanana dia nolavin'ny sosona aluminium laminated ao anaty ravina polyester. Ny inhibitor UV dia alefa ao amin'ny sarimihetsika polyester hanampiana ny fanesorana ny ankamaroan'ny jiro UV manimba amin'ny masoandro. GRAY sarimihetsika dia misy miaraka amin'ny coating coating.
Ny sarimihetsika alokaloka dia napetaka amin'ny rantsankazo aluminium mavesatra be ao anaty boaty cassette aluminium anodised miaraka amin'ny tady borosy miharo mba hiarovana amin'ny vovoka sy ny loto. Tsy tratran'ny mari-pana mafana, mafana mafana na ny hamandoana ny sarimihetsika. Antony iray lehibe ho an'ny efijery roller izay hampiasaina amin'ny tontolo midadasika. Azo alaina koa ny efijery tsy misy kasety.
Mpanome sunblinde amin'ny MOD, Tafika sy tafika isika. Manome masirasira masoandro izahay amin'ny MOD, Navy ary miaramila. Izahay koa dia manome jamba varavarankely amin'ny Navy, MOD ary Miaramila.